राम्रा पक्ष सिक्न राजनीतिक विचारसँग तर्सिनु पर्दैनः परराष्ट्रमन्त्री(अन्तरवार्ता) – Kathmandutoday.com
मंगलबार, ८ असार, २०७८
राम्रा पक्ष सिक्न राजनीतिक विचारसँग तर्सिनु पर्दैनः परराष्ट्रमन्त्री(अन्तरवार्ता)
काठमाण्डु टुडे २०७६ जेठ ३ गते १६:४१ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित गत वैशाख २६ देखि जेठ १ गतेसम्म भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेका छन् । सो सन्दर्भमा दीपेन्द्र अधिकारीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सङ्क्षिप्त विवरणः
मन्त्रीज्यू, तपाईं परराष्ट्र मन्त्री भएपछि देशको परराष्ट्रनीति अलि फराकिलो हुँदै गएको अनुभूति भएको छ । यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
हो, मैले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेपछि सकारात्मक सक्रियता बढाएको छु । नेपालजस्तो देशलाई फराकिलो कूटनीतिक दायराको आवश्यकता छ र यसलाई मैले मुख्यतः चार आयाममा व्याख्या गरेको छु, पहिलो आयाम: छिमेक सम्बन्ध, दोस्रो आयाम: विकास साझेदारसँग लगानी र प्रविधि आदानप्रदान, तेस्रो आयाम: श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्बन्धी कूटनीतिक छलफल र चौथो आयाम : आफूजस्तै साना र विकासोन्मुख देशको सम्बन्ध बढाउने रचनात्मक कूटनीतिक दायरा विस्तार । यी सबै कार्यमा मैले सफ्ट पावर र स्मार्ट पावरको विस्तारमा ध्यान दिएको छु । त्यसैले अहिले देशको कूटनीतिक दायरा केही फराकिलो भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै हामी सबै मुलुकसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ । यस सन्दर्भमा यो भ्रमण मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाउने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा अत्यन्तै सफल र सकारात्मक रह्यो । मूलतः दुवै देश बौद्धमार्गीहरूको बाहुल्य रहेका देश हुन् । नेपाल गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएको हुनाले धार्मिक, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति यो भ्रमण अत्यन्त सकारात्मक र सफल रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तरराष्ट्रिय वैशाख दिवसका अवसरमा करीब ११२ मुलुकका प्रतिनिधिका बीच यो कुरालाई प्रष्ट्याएका छन् र लुम्बिनीको भ्रमण गर्नका निम्ति सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । त्यस अर्थमा यो भ्रमण नेपालको पर्यटन विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले देशगत प्रोफाइल (पार्श्वचित्र) बनाउने काम गरिरहेको छ । कुन देशसँग के अपेक्षा छ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्राथमिकतामा राखेर देशगत प्रोफाइल बनाएका छौँ । अहिलेको सरकार नीतिगत रुपले स्पष्ट छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले देश बाहिर रहेका राजदूतहरूलाई स्पष्टरुपमा निर्देशन दिइसकेको छ । राजदूतहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूले तत्तत् देशसँग व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी र प्रविधि भित्र्याउने दिशामा के के काम गरेका छन् भन्नेबाट नै हुनेछ । अब राजदूतहरू देशको स्पष्ट परराष्ट्र नीतिका आधारमा आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने गरी नै केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेएका सम्पूर्ण नेपालीलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम म सबैलाई देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने खालका निराशाका अभिव्यक्ति बन्द गर्न आग्रह गर्दछु । सबैले देशको विकास, समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ र यो सरकार त्यस कुरामा केन्द्रित छ भन्ने ढङ्गले नै सम्प्रेषण गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु ।
यो सरकार विकास र समृद्धि, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा हरेक किसिमले अहोरात्र खटिएको छ र त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति सफल पनि हुनेछ भन्ने विश्वास मलाई छ । स्वदेश तथा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
विभिन्न भ्रमणका सिलसिलामा हामीले बाह्य मुलुकसँग स्पष्टरुपमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छौँ ।
थपियो फेरी काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा
मेलम्चीमा फेरि यसअघि भन्दा ठूलो बाढी आयो
७७ वर्षमाथिका नागरिकलाई ललितपुर महानगरले बुधबारदेखि कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज दिने